Son Heung-min oo 130,000 oo dollar ugu deeqay dad dhibaneyaal u noqday dab kacay – Gool FM
(London) 16 Abriil 2019. Son Heung-min oo ka tirsan kooxda Tottenham ayaa 130,000 oo dollar waxa ay uu ugu deeqay dhibanayaasha Koonfurta Korea ee uu haleelay dabkii ugu xumaa abid ee ka kaca kaymaha dalkaasi.
“Waxaan aaminsanahay in lacagtu aysan sidaa u sii qiimo badnayn, waxa ugu muhiimsan waa maskax wax loogu qabanayo dhibanayaasha” ayuu yiri Son Heung-min.
Dabka ayaa baabi’iyay 135 guri, laba qof ayaana ku geeriyootay, halka 17,700 oo kooxaha gurmadka ahna loo daad gureeyay aagga dabku ka kacay, iyadoo ay jiraan kummanaan ku guryo beeshay musiibadan.
Ciyaaryahan Son ayaa aad looga qiimeeyaa South Korea, waxaana uu ku jiraa dadka fara ku tiriska ah ee magaca ku leh dalkaasi markii ay wax dhacaanna kaalmo deg deg ah bixiya.
Laakiin dadka qaar ayaa dhaleeceeyay laacibkan Tottenham oo ku tilmaamay waxa uu bixiyay inaysan ahayn wax qiimo leh marka loo eego mushaarka Isbuuclaha ah ee uu qaato oo gaaraya 140,000 oo giniga istarliinka ah (183,000 oo dollar).
Laacibkan 26 jirka ah ayaa aad sumcad ugu leh xulka South Korea iyo Tottenham, waxaana xilli ciyaareedkan uu dhaliyay 18 gool, halka 10 goolna uu saaxiibadiisa kale ku caawiyay dhammaan tartammadii kala duwanaa ee uu u dheelay naadigiisa.
Shaxda rasmiga ah kulanka Champions League ee kooxaha Juventus Vs Ajax